Shir lagu diyaarinayo Istiraatiijiyadda Waxbarashada Dastuurka oo ka furmay Muqdisho[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shir lagu diyaarinayo Istiraatiijiyadda Waxbarashada Dastuurka oo ka furmay Muqdisho[Sawirro]
MUQDISHO – Muqdisho ayaa maanta martigelineysa shir lagu diyaarinayo Istaraatiijiyadda Waxbarashada iyo Latashiyada Dadweynaha ee dib-u-eegista Dastuurka (DUED) oo socon doona sedexda maalin ee soo socota ayna ka soo qaybgaleen wufuud ka kala timid dawlad goboleedyada.
Wasaaradda ayaa shir noocan oo kale ah bishii August qabatay, midkan maanta furmay ayaana ah wejigii ugu dambeeyay ee diyaarinta Istiraatiijiyadda.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Mudane Maxamed Abuukar Zubeyr ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha waxa uuna ka hadlay muhiimadda kulankan.
Wasiir Ku-Xugeenka oo shirka furay ayaa ugu horeeyn ka hadlay dedaalada ay wado Wasaaradda iyo qorsheyaasha dhaw.
“Sida dad badan oo idinka mid ah ay ka warqabaan, waxa aan sideedii bil ee la soo dhaafay qabanay hawlo ballaaran, waxa aan dejinay qorsho ku aadan DUED, Istiraatiijiyadda sedexda maalin ee soo socota aad diyaarin doontaana waxa ay muhuum u tahay fulinta qorshaha guud ee Wasaaradda iyo Gudiyada ay hawlwadaaga yihiin ay dejiyeen” ayuu yiri Mudane Xuseen Cabdi Cilmi.
Ugu dambayn, Wasiir Ku-Xigeenka ayaa ka qaybgalayaasha uga mahadceliyay waqtiga ay ku bixinayaan shirkan waxa uuna u rajeeyay in ay guul ku soo dhameeyaan diyaarinta Istiraatiijiyadda ay ku hawlanyihiin.